WHY EXHIBIT - Shanghai Formote Exhibition Service Co. Ltd.
FAMPITAN-TENIM-POSITIA-DRATSY ANY MPANJAKA
RayWhite-Nihaona namana maro izay liana any Aostralia momba an'io fampisehoana io isika. Matoky tanteraka izahay ary manantena ny hanokatra sampana ary hiditra amin'ny tsenan'i Atsinanana Shinoa tsy ho ela. Tena nahomby tokoa ity fampirantiana ity. Ny mpikarakara an'ity fampirantiana ity dia tokony hoderaina satria mahagaga.
Keller Williams-Ny OpI OPI dia sehatra iray natokana ho an'ny orinasa iraisam-pirenena mitady hiditra amin'ny tsenan'ny sinoa. Nosokafan'ny mpividy ny fananana sinoa maro ny fanananay, ka manome tombony betsaka amin'ny raharaham-barotra. Tianay ny misaotra ny mpikarakara noho izy nanampy anay handray anjara amin'ilay fampisehoana.
21 Taonjato-Noho ny fampisehoana OPI dia afaka nanolotra ny serivisy fifindra-monina isan-karazany izahay ho an'ireo vahoaka mpividy sinoa liana be mpividy. Nandritra izany fotoana izany dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa izahay ary tena afa-po tamin'ny fampiroboroboana tamin'ny alàlan'ity hetsika ity.
LJ Hooker-Efa nandray anjara tamin'ny Foara Fampiasam-bolan'ny Fifindra-monina any ivelany nandritra ny 3 taona lasa izahay. Ity no fampirantiana tsara indrindra nataontsika teto China. Raha oharina amin'ireo hetsika hafa izay efa nihaoninay, dia hita eto tokoa ny kalitaon'ny mpanjifa manana tanjona matanjaka eto. Izahay dia vonona hiatrika fiaraha-miasa stratejika lava maharitra miaraka amin'ireo mpikarakara amin'ny taona 2018.
DTZ-Tao anatin'ny roa taona lasa dia nihalehibe ny expo OPI nanjary tena nahalasa vola sy tena mahaliana. Lasa zava-dehibe amin'ny tetik'ady iraisam-pirenena amin'ny indostrian'ny trano amerikanina.
NY VATO ENY AMIN’NY TRANO FAROTRA ANY SHANGHAI
Hendry · OPI Shanghai 2018 / Fahalavoana dia hotanterahina hatrany afovoan-tanànan'i Shanghai.
Lujiazui Skyline: Fampahalalana an-tsokosoko any Shanghai
NY VOAVANA VOAVOLANA IZANY DIA MISY ZAVA-BAIBOLY ARY MISY AZONY, MIARAKA NY FAMPIASANA TSY MAHAY ARY IZANY.
Sehatra mahavariana amin'ny fampisehoana tetikasa any ivelany amin'ireo sangany any Shina.
Ny Lujiazui dia mipetraka eo akaikin'ny Bund eo atsinanan'ny renirano Huangpu. Namboarina ho distrika ara-bola vaovao an'i Shanghai hatramin'ny fiandohan'ny taona 1990, ireo tranobe malaza hita eny amin'ny habakabaka avy any amin'ny Bund dia ahitana ny Tanana Voahangy Voahangy, trano Jin Mao, Shanghai Center Financial, Super Brand Mall, Shanghai IFC, Bank of China Tower ary ny tilikambon'i Shanghai.
Tohanan'ny fandefasana ireo MEDIA & MAMPIASA FAHAGAGANA